ကိုဗစ်ရောဂါဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် ပိုတင်းကြပ်လာလို့ မြို့ခံတွေ စားဝတ်နေရေး အခက်ကြုံနေရပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူများနေတဲ့ နေရာတွေမှာ အိမ်ပြင်ထွက်ချိန်ကိုပါ ထပ်မံကန့်သတ်နေပါတယ်။ နေ့ခင်းပိုင်းအချိန်တွေမှာ အိမ်ပြင်မထွက်ရ သတ်မှတ်နေတာမို့ အဲဒီမြို့တွေက မြို့ခံတွေ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ပိုလာတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကို မခွါညို ကပြောပြပါမယ်။
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံထဲက မြို့နယ် ၁၀၀ ကျော်မှာ မလိုအပ်ရင် အိမ်ပြင်မထွက်ရ ကန့်သတ်ချက်ထုတ်ပြန်ထားချိန်မှာပဲ တချို့ မြို့တွေမှာ အိမ်ပြင်ထွက်နိုင်တဲ့ အချိန်ကိုပါ ထပ်ပြီး သတ်မှတ်နေပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က စပြီး မနက် ၁၀ နာရီကနေ ညနေ ၃ နာရီအတွင်း အိမ်ပြင်မထွက်ရ ကန့်သတ်လိုက်ပြီး အရေးတကြီးကိစ္စရှိမှ ခြွင်းချက်နဲ့ ထွက်ခွင့်ပြုတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပြပါတယ်။
"လော်နဲ့လိုက်အော်တယ်။ မနက် ၁၀နာရီဆိုမထွက်ရတော့ဘူး။ ညနေ ၃နာရီပြန်ထွက်ရမယ်။ ၁၀နာရီ မထွက်ရတာက မနက်အစောကနေ ၁၀နာရီထိပေါ့။ ၁၀နာရီဆိုဈေးတွေဘာတွေ အကုန်သိမ်း။ ပြီးရင် ညနေ ၃နာရီကနေ ည၇နာရီအထိပေါ့။ သူတို့ကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုပြီးလိုက်အော် တာညကလေ။ တကယ့် အရေးတကြီးသွားလာမှု ခွင့်ပြုတယ်လို့တော့အော်တယ်။အရင်တုန်းကထက် စာရင်သေနှုန်းကနည်းနည်းပါးသွားပြီ။ အခုပါးတော့မှထပ်ထိန်းချုပ်တာတော့ သူတို့မှသိမယ် ဘယ်လို တုန်းဆိုတာ။ ဖြစ်မှတော့နေ့လည်လည်းသိပ်မထွက်ကြပါဘူး. အခုအချိန်ကန့်သတ်တဲ့ အခါကျတော့ မနက်ပိုင်းစုပြုံဝယ်တာပေါ့ တို့လည်းအဲဘက်ရောက်တော့ ဈေးဘက်တွေလူတွေကများနေတာပေါ့။ "
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကတော့ အလုပ်အချိန်အတွင်းနဲ့ အရေးကြီးကိစ္စ ရှိချိန် တွေမှာသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် စိစစ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ အတွက်နဲ့ သေရေးရှင်ရေးကိစ္စတွေအတွက် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေဆီတင်ပြ ပြောဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြင်ဦးလွင် ဒေသခံတွေက ပြောပြပါတယ်။ အိမ်ပြင်ထွက်ချိန် ဒီနေ့ စတင်ကန့်သတ်ခံရတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ အစောပိုင်းထဲက အပြင်ထွက်တဲ့သူတွေတချို့ကို ကိုဗစ်စည်းကမ်းအရဆိုပြီး စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်တာ အရေးယူတာမျိုး လုပ်တာရှိတယ်လို့လည်း ဒေသခံတချို့က ပြောပါတယ်။
အခုလို အိမ်ပြင်ထွက်ချိန် အစောထဲက ကန့်သတ်ထားတဲ့ မန္တလေးမြို့ထဲက မြို့နယ် ၇ ခုမှာတော့ အဲဒီလို အချိန်ကန့်သတ်တာတွေကို ဒီနေ့မှာ ဖယ်ရှားပေးခဲ့တယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။ အရင်ကတော့ ၉ နာရီကနေ ညနေ ၃ နာရီအတွင်း အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာပါ။
ခုလို မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ မုံရွာ၊ ပခုက္ကူ၊ ပြည် အပါအဝင် မြို့တော်တော်များများမှာ ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လို့ဆိုပြီး နေ့ပိုင်းအချိန်တွေမှာ အပြင်မထွက်ဖို့ ကန့်သတ်ချက်တွေ သြဂုတ်လဆန်းထဲက ထုတ်ထားတဲ့အပြင် စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တာ၊ သတ်မှတ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ရင် ဒဏ်ပေးတာ၊ အရေးယူတာမျိုးတွေကို လုပ်နေတယ်လို့ အဲဒီမြို့နယ်တွေက မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ ခုလိုအိမ်ပြင်ထွက်ချိန် ကန့်သတ်တဲ့အတွက် စီးပွားရှာရခက်ခဲသလို စားဝတ်နေရေးပိုကျပ်တည်းမှုတွေဖြစ်လာနေရတယ်လို့ မုံရွာဒေသခံ တဦးကခုလိုပြောပါတယ်။
"နေ့ပိုင်း ၁၀နာရီကနေ၄နာရီအထိတော့ အပြင်မထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားတယ်။ တပါတ်လောက်တော့ ရှိသွားပြီ။ သူတို့အကြောင်းပြချက်ကတော့ ကိုဗစ်ကိုတော့ အကြောင်းပြတယ်။ ဒါပေမယ့် မုံရွာပြည်သူ တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေ အမြဲရှိနေတော့ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ချင်တာလဲပါမယ်။ အဓိကကတော့ ပြည်သူတွေ အလိုလိုနေရင်းမှကိုဗစ်ဒဏ် သူတို့ရဲ့ထိုးစစ်တွေရဲ့ ဒဏ်တွေနဲ့အတူ ခံစားနေရတော့စားဝတ်နေရေးတွေ အရမ်းခက်ခဲနေတယ်။ ကျန်းမာရေးအရ ဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်တာတွေ အောက်ဆီဂျင်ယူရတာတွေလည်း ခက်ခဲနေတယ်။ ပြည်သူကို ကူညီပေးနေတာတွေလည်း ခက်ခဲလာတာပေါ့. စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာကြတော့ အကူပညီတွေပိုတောင်းခံလာရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။"
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ဒေသအချို့မှာအိမ်ပြင်ထွက်ချိန် ကန့်သတ်မှုတွေထပ်တိုး လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ စစ်ကောင်စီဘက်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မနေ့က သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်း နေပြည်တော်က တပ်ကုန်းနဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းက ထားဝယ်နဲ့ မြိတ်ဒေသတွေမှာ အတည်ပြုလူနာတိုးလာတဲ့အတွက် မလိုအပ်ရင် အိမ်ပြင်မထွက်ရ stay at home အနေနဲ့ ကျင့်သုံးမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးမှာ stay at home ကျင့်သုံးတဲ့ မြို့နယ်ပေါင်း လက်ရှိ ၁၁၄ မြို့နယ်ရှိပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကပျရောဂါ ကူးစကျဖွဈပှားသူမြားနတေဲ့ နရောတှမှော အိမျပွငျထှကျခြိနျကိုပါ ထပျမံကနျ့သတျနပေါတယျ။ နခေ့ငျးပိုငျးအခြိနျတှမှော အိမျပွငျမထှကျရ သတျမှတျနတောမို့ အဲဒီမွို့တှကေ မွို့ခံတှေ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲ ပိုလာတဲ့အကွောငျး ရနျကုနျကလာတဲ့သတငျးကို မခှါညို ကပွောပွပါမယျ။
ကိုဗဈကပျရောဂါကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံထဲက မွို့နယျ ၁၀၀ ကြျောမှာ မလိုအပျရငျ အိမျပွငျမထှကျရ ကနျ့သတျခကျြထုတျပွနျထားခြိနျမှာပဲ တခြို့ မွို့တှမှော အိမျပွငျထှကျနိုငျတဲ့ အခြိနျကိုပါ ထပျပွီး သတျမှတျနပေါတယျ။ ပွငျဦးလှငျမွို့မှာ ဒီနသွေ့ဂုတျလ ၂၃ ရကျနကေ့ စပွီး မနကျ ၁၀ နာရီကနေ ညနေ ၃ နာရီအတှငျး အိမျပွငျမထှကျရ ကနျ့သတျလိုကျပွီး အရေးတကွီးကိစ်စရှိမှ ခွှငျးခကျြနဲ့ ထှကျခှငျ့ပွုတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပွပါတယျ။
"လျောနဲ့လိုကျအျောတယျ။ မနကျ ၁၀နာရီဆိုမထှကျရတော့ဘူး။ ညနေ ၃နာရီပွနျထှကျရမယျ။ ၁၀နာရီ မထှကျရတာက မနကျအစောကနေ ၁၀နာရီထိပေါ့။ ၁၀နာရီဆိုဈေးတှဘောတှေ အကုနျသိမျး။ ပွီးရငျ ညနေ ၃နာရီကနေ ည၇နာရီအထိပေါ့။ သူတို့ကတော့ကိုဗဈကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဆိုပွီးလိုကျအျော တာညကလေ။ တကယျ့ အရေးတကွီးသှားလာမှု ခှငျ့ပွုတယျလို့တော့အျောတယျ။အရငျတုနျးကထကျ စာရငျသနှေုနျးကနညျးနညျးပါးသှားပွီ။ အခုပါးတော့မှထပျထိနျးခြုပျတာတော့ သူတို့မှသိမယျ ဘယျလို တုနျးဆိုတာ။ ဖွဈမှတော့နလေ့ညျလညျးသိပျမထှကျကွပါဘူး. အခုအခြိနျကနျ့သတျတဲ့ အခါကတြော့ မနကျပိုငျးစုပွုံဝယျတာပေါ့ တို့လညျးအဲဘကျရောကျတော့ ဈေးဘကျတှလေူတှကေမြားနတောပေါ့။ "
နိုငျငံ့ဝနျထမျးတှနေဲ့ ကုမ်ပဏီဝနျထမျးတှကေတော့ အလုပျအခြိနျအတှငျးနဲ့ အရေးကွီးကိစ်စ ရှိခြိနျ တှမှောသှားလာနိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ စိစဈခှငျ့ပွုမယျလို့ ထုတျပွနျထားပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကိစ်စတှေ အတှကျနဲ့ သရေေးရှငျရေးကိစ်စတှအေတှကျ သကျဆိုငျရာရပျကှကျရဲ့ အုပျခြုပျရေးမှုးတှဆေီတငျပွ ပွောဆိုရမှာဖွဈတယျလို့ ပွငျဦးလှငျ ဒသေခံတှကေ ပွောပွပါတယျ။ အိမျပွငျထှကျခြိနျ ဒီနေ့ စတငျကနျ့သတျခံရတဲ့ ပွငျဦးလှငျမွို့မှာ အစောပိုငျးထဲက အပွငျထှကျတဲ့သူတှတေခြို့ကို ကိုဗဈစညျးကမျးအရဆိုပွီး စဈဆေးမှုတှေ လုပျတာ အရေးယူတာမြိုး လုပျတာရှိတယျလို့လညျး ဒသေခံတခြို့က ပွောပါတယျ။
အခုလို အိမျပွငျထှကျခြိနျ အစောထဲက ကနျ့သတျထားတဲ့ မန်တလေးမွို့ထဲက မွို့နယျ ၇ ခုမှာတော့ အဲဒီလို အခြိနျကနျ့သတျတာတှကေို ဒီနမှေ့ာ ဖယျရှားပေးခဲ့တယျလို့ မွို့ခံတှကေ ပွောပါတယျ။ အရငျကတော့ ၉ နာရီကနေ ညနေ ၃ နာရီအတှငျး အိမျပွငျထှကျခှငျ့ ပိတျပငျထားတာပါ။
ခုလို မန်တလေး၊ စဈကိုငျး၊ မကှေး၊ မုံရှာ၊ ပခုက်ကူ၊ ပွညျ အပါအဝငျ မွို့တျောတျောမြားမြားမှာ ကိုဗဈထိနျးခြုပျရေးအတှကျလို့ဆိုပွီး နပေို့ငျးအခြိနျတှမှော အပွငျမထှကျဖို့ ကနျ့သတျခကျြတှေ သွဂုတျလဆနျးထဲက ထုတျထားတဲ့အပွငျ စဈဆေးမှုတှပွေုလုပျတာ၊ သတျမှတျခကျြကိုဖောကျဖကျြရငျ ဒဏျပေးတာ၊ အရေးယူတာမြိုးတှကေို လုပျနတေယျလို့ အဲဒီမွို့နယျတှကေ မွို့ခံတှကေပွောပါတယျ။ ခုလိုအိမျပွငျထှကျခြိနျ ကနျ့သတျတဲ့အတှကျ စီးပှားရှာရခကျခဲသလို စားဝတျနရေေးပိုကပျြတညျးမှုတှဖွေဈလာနရေတယျလို့ မုံရှာဒသေခံ တဦးကခုလိုပွောပါတယျ။
"နပေို့ငျး ၁၀နာရီကနေ၎နာရီအထိတော့ အပွငျမထှကျရအမိနျ့ထုတျထားတယျ။ တပါတျလောကျတော့ ရှိသှားပွီ။ သူတို့အကွောငျးပွခကျြကတော့ ကိုဗဈကိုတော့ အကွောငျးပွတယျ။ ဒါပမေယျ့ မုံရှာပွညျသူ တှရေဲ့ လှုပျရှားမှု တှလေမျးပျေါတိုကျပှဲတှေ အမွဲရှိနတေော့ဒါတှကေိုထိနျးခြုပျခငျြတာလဲပါမယျ။ အဓိကကတော့ ပွညျသူတှေ အလိုလိုနရေငျးမှကိုဗဈဒဏျ သူတို့ရဲ့ထိုးစဈတှရေဲ့ ဒဏျတှနေဲ့အတူ ခံစားနရေတော့စားဝတျနရေေးတှေ အရမျးခကျခဲနတေယျ။ ကနျြးမာရေးအရ ဆေးဝါးကုသမှုလိုအပျတာတှေ အောကျဆီဂငျြယူရတာတှလေညျး ခကျခဲနတေယျ။ ပွညျသူကို ကူညီပေးနတောတှလေညျး ခကျခဲလာတာပေါ့. စားဝတျနရေေးခကျခဲလာကွတော့ အကူပညီတှပေိုတောငျးခံလာရတဲ့ အခွအေနဖွေဈနတေယျ။"
ကိုဗဈကပျရောဂါကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ဒသေအခြို့မှာအိမျပွငျထှကျခြိနျ ကနျ့သတျမှုတှထေပျတိုး လုပျဆောငျနတေယျလို့ စဈကောငျစီဘကျက ထုတျပွနျထားပါတယျ။
မနကေ့ သွဂုတျလ ၂၂ ရကျ ရကျစှဲနဲ့ ထုတျပွနျခကျြမှာလညျး နပွေညျတျောက တပျကုနျးနဲ့ တနင်ျသာရီတိုငျးအတှငျးက ထားဝယျနဲ့ မွိတျဒသေတှမှော အတညျပွုလူနာတိုးလာတဲ့အတှကျ မလိုအပျရငျ အိမျပွငျမထှကျရ stay at home အနနေဲ့ ကငျြ့သုံးမယျလို့ ထုတျပွနျထားပါတယျ။ တနိုငျငံလုံးမှာ stay at home ကငျြ့သုံးတဲ့ မွို့နယျပေါငျး လကျရှိ ၁၁၄ မွို့နယျရှိပါတယျ။